musha nyika dzakabatana WWE Superstars Bray Wyatt Yehucheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
Kutanga kuenda, ane zita rezita "Iyo Fiend".
Yedu Biography yeBray Wyatt Yehudiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Chokwadi cheMhuri uye Vabereki.
Kunyanya, Hupenyu hwake hwepakutanga, Mararamiro, Hupenyu hwepamwe uye zvimwe zviitiko zvinozivikanwa kubva paakanga ari mudiki kusvika paakave mukurumbira.
Bray Wyatt Biography - Tarisa Hupenyu hwake hwepakutanga uye Kukura Kukura.
Ehe, munhu wese anoziva nezvake achiratidzira chisikwa chakasviba uye chinoshamisa chemutungamiri weketi yechinamato muWWE Shows.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveBray Wyatt's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Bray Wyatt Yehucheche Nyaya:
Uyu ndiBray Wyatt muhudiki hwake.
Kutanga kubva, mazita ake azere Windham Lawrence Rotunda. Bray Wyatt akazvarwa pazuva re23rd raMay 1987 kuvabereki vake muguta reBrooksville muFlorida, United States.
Ndiye wekutanga pavana vatatu akazvarwa kuna amai vake, Stephanie Rotunda, uye baba, Mike Rotunda. Sezvawakaona, Rotunda izita rekuberekwa nenhengo dzemhuri yaBray Wyatt.
Wyatt's American nyika haina mubvunzo kunyangwe zvisiri zvakawanda zvinozivikanwa nezvekwakabva mhuri yake.
Asi isu tinoziva kuti akakurira muguta reBrooksville muFlorida padivi pemukoma wake, Taylor Michael, uye hanzvadzi, Mika Rotunda.
Pazasi pane isingawanzo pikicha yekutanga inoratidza vabereki vaBray Wyatt padivi pake nevanin'ina vake vaviri.
Kukurira muBrooksville, Wyatt mudiki aive mwana wemumhanyi akadanana neAmerican Nhabvu semutambo wake wekutanga wehudiki.
Akanga akazvipira kutamba kumutambo kunyange zvazvo vabereki vake vaiva nezvavanofarira mune imwe mutsara wemitambo yemhuri.
Bray Wyatt Mhuri Yemashure:
Kare ikako, vabereki vaBray Wyatt vakashanda yaipfuura imba yepakati. Mari dzemhuri dzakabva kuWrestling, yaive mutambo wemhuri wakanaka waiitwa nezvizvarwa zvemhuri.
Kutaura nezvemutambo wemhuri, Waizviziva here kuti Sekuru vaWyatt nababa vaive venguva-imwe yekurwa nyanzvi?. Iye aitova nanamainini vaivawo nyanzvi mumitambo.
Sekuru vaWyatt ndiye anoshamisa Blackjack Mulligan nepo vamwe vake vana (Wyatt baba vababa) avo vakasiya mucherechedzo wavo munyika yehunyanzvi mutsimba ndewe - Barry naKendall Windham.
Baba vaBray Wyatt (kuruboshwe) nasekuru (kurudyi) vaive venguva-imwe nyanzvi yekurwa.
Bray Wyatt Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Kuita mutsimba nababa vake panguva yehudiki, zvaingove muropa kuti Wyatt mudiki aitamba nekutamba pane imwe nguva muhupenyu hwake hwepakutanga.
Pakutanga, vabereki vaBray Wyatt vakaita kuti anyore paHernando High School, imwe yakamubatsira kuwana kudanwa kwake.
Ndichiri kuchikoro chesekondari, kutora chikamu kwaBray Wyatt munhabvu yechikoro chesekondari kwakaenderana nekuonekwa mumakwikwi emutsimba.
Muchokwadi, Wyatt aive chikamu chechikwata cheHernando High icho chakahwina zita rekurwira nyika vabereki vake vasati vamuita kuti afambire mberi kuenda kuKoreji yeSequoias.
Achiri kuCollege yeSequoias, Wyatt akatamba nhabvu zvinokatyamadza kwemwaka miviri, budiriro yakamuona achichengetedza nhabvu yenhabvu kuTroy University.
Paive paTroy University apo Wyatt akapihwa zvakanyanya kutamba nhabvu, zvichikuvadza vadzidzi vake.
Nekudaro, akakundikana kuwana mibairo yakakwana yekupedza kudzidza. Kutsamwa uye kunzwa kurasika, Wyatt akaita sarudzo yekusiya pasi uye kudzoka pakudzidzira kwehunyanzvi mukurwa.
PaYunivhesiti yeTroy, kufarira kwaWyatt mukoreji nhabvu kwakaona kudzikira kwakanyanya kwemamaki ake.
Bray Wyatt Makore Ekutanga MuWrestling:
Kana nguva nezviitiko zvanyatsosvika, Wyatt akaita dhiri rake neFlorida Championship Wrestling (FCW) muna Kubvumbi 2009 achishandisa zita rekuridza Alex Rotundo.
Ndichiri kuFCW, mutsimba wekurwa nemukoma wake Taylor “Bo"Michael akahwina mukombe wehumambo nekuumba timu yeteki.
Mumashure mekurwisa kwekuedza kuedza akaona Wyatt achienderera mberi kuenda kuNXT uko kwaaigara achitaridzika muWWE pasi pechirongwa chinonzi Husky Harris.
Chii chimwe?… Muna 2012 Wyatt akagamuchira zita remutambo "Bray wyatt”Nekumaka semutungamiriri wechitendero chakashata cheThe Wyatt Mhuri yaizivikanwa nekurova vamwe vaikwikwidza navo.
Bray Wyatt Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kuchinja kwebasa raWyatt kwakauya mu2013 paakasvika pakupinda muWWE main rosta ndokuenderera mberi nekutanga kukakavadzana-ne-one John Cena, asi akazopedzisira arasikirwa neMutungamiri weCenation.
Mumakore akatevera, Wyatt akaramba akanaka mumusoro nekuda kwekutya kwake aine wrestler akati wandei saDean Ambrose, The Undertaker Ryback uye Randy Orton uyo akave chikamu chemhuri yeWyatt pane imwe nguva.
Bray Wyatt Bio - Simuka Mukurumbira Nhau:
Mukurumbira akazogogodza pamusuwo waWyatt muna 2017 paakarwa mumutambo kuti atore mukombe weWWE kuElimination Chambers.
Wyatt akahwina zita iri nekukunda Baron Corbin, John Cena, Dean Ambrose, AJ Styles, uye The Miz.
Akaenderera mberi kusanganisa kukunda kwake kwekutanga nekugadzira timu yetigi naMat Hardy. Pamwe chete, iyo duo yakave nekubudirira kukuru. Kuti vafadze vateveri vake, Bray Wyatt akabata dambarefu rake reUniversal pamazuva gumi nemasere. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Bray Wyatt's Musikana, Wife uye Vana:
Kuenderera mberi nehupenyu hwerudo hwaWyatt, mutsimba anga ari pasi penzira kaviri. Yekutanga yaive nemudiwa wake wekusekondari, Samantha.
Rwavo rwaive rudo rwaiita serusingaperi sezvo Wyatt aisafunga kuita mumwe musikana asati asunga pfundo naye muna 2012.
Ivo-vepo-vaviri vakaramba vachiita vana vaviri vasati vapatsanurana mu2017. Kutevera kurambana, Wyatt akaita pachena hukama hwake nemusikana wake wepachivande uye WWE mutauri mhete JoJo Offerman mu2018.
Shiri dzerudo idzo dzichazove murume nemukadzi (saFeb 2020), vafamba vachigara pamwe chete uye vane mwana achangozvarwa anonzi Knash.
Bray Wyatt Hupenyu Hwemhuri:
Mhuri ndimo mune rudo nerutsigiro zvisingambomira kuyerera kwaBray Wyatt. Muchikamu chino, isu tinokuunzira chokwadi nezvevabereki vaBray Wyatt uye nedzimwe nhengo dzemhuri yake.
Nezve Bray Wyatt Baba:
Baba vaWyatt, Mike Rotunda inyaya yeWrestling. Anodada kuve neWyatt inotora mutambo wewrestling senzira inoshanda mushure mekusiya chikoro kubva kuTroy University. Kuve wekare-nyanzvi mutsimba, baba vaWyatt - Mike anowedzera semudzidzisi uye mudzidzisi kwaari.
About Bray Wyatt Amai:
Stephanie Rotunda ndiye amai vaBray Wyatt. Iye anofarira murume wake anobvawo kumhuri yevakarwa. Stephanie ndiye mwanasikana weaimbove murwi anononoka Robert Deroy Windham AKA Blackjack Mulligan. Stephanie anodada nekuona mwanakomana wake achitevera tsoka dzasekuru nasekuru vavo.
Nezve Bray Wyatt Vanun'una:
Wrestler ane hama mbiri dzaakakurira nadzo. Ivo vanosanganisira munin'ina wake Taylor Michael Rotunda akatumidzwa zita rekuti Bo Dallas pamwe nasisi Mika Rotunda.
Kufanana naBray Wyatt, Bo Dallas ane basa rakakura rekurwa asi kwete sekurumbira senge remukoma wake mukuru.
Zvinoenderana nezvatakawana, hanzvadzi yaBray Wyatt, Mika, haazi nyanzvi yewrestling asi anofarira zvemitambo nedzimwe nzira dzevanhu.
About Bray Wyatt Sekuru naTete:
Nepo zvinyorwa zvidiki zviripo nezve maiguru vake, isu tinoziva nezvaKendall naBarry Windham vanova babamunini vaBray Wyatt. Iyo yekupedzisira inozivikanwa zvakanyanya nekuonekwa kwake neNational Wrestling Alliance (NWA) uye World Championship Wrestling (WCW).
Bray Wyatt Hupenyu hweMunhu:
Ari kure nezvake mu-mhete anoedza, Bray Wyatt ane munhu akakura ane hunhu hunotsanangurwa nechiratidzo cheAries Zodiac. Iye ane simba, anozvishingisa, akasimba, ane pfungwa huru yekuseka uye haawanzo kuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwepamoyo.
Mabasa anoitwa neano wrestler sekufarira kwake uye kuita zvemitambo zvinosanganisira kufamba, kutamba nhabvu yeAmerica, kuteerera mimhanzi, kutamba mitambo yemavhidhiyo, kuona mafirimu uye kupedza nguva yake nemhuri yake neshamwari.
Bray Wyatt Mararamiro:
Kufanana nevakawanda varwi, Bray Wyatt ari kuita mutsimba senzira yekunyatsoratidza simba rake. Kunyangwe zvakadaro, iye anowana rakakura dhiri mumihoro uye mibairo kubva mumutambo.
Nekuda kweizvozvo, Wyatt ane mari inofungidzirwa kuti inodarika emadhora zviuru zviviri panguva yekunyora iyi bio uye anorarama hupenyu hwoumbozha.
Mararamiro akadaro anoitwa pachena muunganidzwa wemotokari yaWyatt iyo inosanganisira Dodge Challenger SRT Demon. Iyo mota inobatana nevamwe vakakwira vatasvi ekupinda nekubuda mugaraji reimba inodhura yewrestler kuMiami muFlorida.
UPENYU hwaBray Wyatt- Uchapupu Hwekurarama Kwakanaka: Haisi nguva dzese iwe paunoona varwi vachivhura madhoo emota dzepamusoro, asi Wyatt anodaro.
Bray Wyatt Chokwadi:
Kuputira yedu yeBray Wyatt nyaya yehucheche uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezveiye mutsimba.
Chokwadi #1 - Kwakatangira yake Fiend Mask:
Bray Wyatt's Fiend mask yakagadzirwa naTom Savini.
Bray Wyatt paakatanga shanduko yake muFiend, akaenda kune imwe yeUS akanakisisa kuti imubatsire kupora maskic yake yekumusoro. Bray Wyatt akatsvaga masevhisi aSavini anonyanya kuzivikanwa nebasa rake rekuparadza mumunda weakakosha make-up mhedzisiro.
Chokwadi #2 Sista Abigail ndiani?
Isu tese tinoziva Bray Wyatt ane yekupedzisa danho inonzi Sista Abigail uyo anonzi akapfuura kare kare, neguva rake richiratidzwa kakawanda. Chokwadi ndechekuti, Hanzvadzi Abigail havana kufa sekuratidzwa kwaakaitwa naBray. Iye mupenyu uye haana kuita kutanga kwake mumhete.
Chokwadi #3 - Chitendero:
Bray Wyatt haina kukura pachinamato. Izvi zvinoonekwa mukuti mapeji ake enhau haana hukama nezvinyorwa zvinosimudzira kutenda. Asi mikana iriko mukumufarira kuva muKristu.
Chokwadi # 4 - Tattoos:
Wanga uchiziva here kuti humwe hunhu hunobatsira wrestler kumira kugona kwake kushandura maattoo ake ekare kana hunyanzvi hwemuviri kune chero chinhu chinowirirana nekuramba achimaka muWWE?
Chokwadi # 5 - Kusvuta uye Kunwa:
Zvingave zviri nyore kutarisa iyo wrestler ichisimudza mamwe mazita muWWE pane kumubata achiputa kana kunwa zvisina basa. Asi isu tine chokwadi chekuziva kuti anokoshesa hutano hwake uye haazopinde mune zvehutano-zvinokanganisa maitiro.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Bray wyatt Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Bray Wyatt Biography Chokwadi (Wiki Inquiries)
Zita rizere: Windham Lawrence Rotunda
Zita rekudanwa: Iyo Fiend
Vabereki: Mike Rotunda (Baba), naStephanie Rotunda (Amai)
Vanun'una: Bo Dallas (Hama) naMika Rotunda (Sista)
Mukadzi: Samantha (Divorced in 2012), JoJo Offerman (Present)
Vana: Knash, Cadyn Rotunda naKendyl Rotunda
Uncle: Barry Windham uye
Mumitemo: Sarah Bäckman
Vanasekuru: Blackjack Mulligan
Kupedzisa Fambisa: Sista Abigail
Dzidzo: Hernando High Chikoro, Hernando, MS 38632, United States.
Imba Yemhuri: Miami, Florida, United States (kubvira muna Kurume 2020)
kukwirira: 6 ft 3 mu (191 cm) VAKADZWA
Zuva rekuzvarwa: Dai 23, 1987
Age: 32 (Kubva munaKurume 2020)